Akụkọ - Gini bu Uru nke sistemụ Oge Variable?
Kemgbe igwe ahụ batara, ndị mmadụ akwụsịbeghị imeziwanye ya, anyị ahụkwala ọgbọ nke injin ọhụrụ ndị nwere nchupu dị iche iche site na nke ukwu na nke obere. Site na mmụba nke ụgbọ ala, anyị webatara ọgba aghara ike dị egwu. , Mmanụ, ihe na-enweghị mmeghari ohuru, jiri nwayọ nwayọ site na ngwupụta anyị kwa ụbọchị. Dịka ọgbọ ọhụrụ, anyị anaghị atụle okwu ike ma ọ bụ chekwaa ụfọdụ ihe maka ọgbọ ọzọ. Site na mbọ ọrụ injinịa anyị, anyị mepụtara ụdị igwe ọkụ na - azọpụta ume ma weta teknụzụ na - azọpụta mmanụ. Taa ụgbọ ala engine valve soplaya ga-esoro gị rite uru nke sistemụ oge mgbanwe agbanwe agbanwe.
Na mgbakwunye na trotul na tobaim (ma ọ bụ n'ibu abawanye), mmiri na-emetụta ikuku na cylinder gụnyere valves.
N'ikwu okwu n'ozuzu, valvụ na-agbanwe agbanwe gụnyere ọtụtụ ụdị dị iche iche dị iche iche: oge ​​mgbanwe na-eri nri, na-agbanwe agbanwe na akụkụ oriri, oge na-agbanwe agbanwe n'akụkụ akụkụ, na ntụgharị dị elu n'akụkụ iyuzucha. Enginesfọdụ engine nwere naanị otu n’ime ha, ụfọdụ injin nwere ọtụtụ n’ime ha n’otu oge. Ya mere, teknụzụ “mgbanwe oriri” nke injin dị iche iche abụchaghị otu nha usoro.
Kpụrụ nke oge valve na-agbanwe agbanwe
Principlekpụrụ ọrụ nke injin mmanụ ụgbọala anọ anyị maara nke ọma. Anọ na-arụ ọrụ nke mmịpụta, nrụgide, ọrụ, iyuzucha, na ọrụ okirikiri na-aga n'ihu nke injin ahụ nwere mmetụta na-enweghị ike ịgụta ọnụ na oge mmeghe na mmechi. Onye ọ bụla maara na valvụ ahụ na-ebugharị site na crankshaft nke engine site na camshaft, na oge valve na-adabere na ntụgharị ntụgharị nke camshaft ahụ. Na igwe nkịtị, a na-edozi oge mmeghe na mmechi nke valvụ oriri na ikpochapu. Oge a kara aka siri ike iburu n'uche ọrụ ọrụ nke injin ahụ dị ọsọ ọsọ. Anyi choro ime ka igwe ahu rute elu karie nke anyi n’emeghariihe ochicho nke camshaft iji gbanwee oge mmeghe na mmechi nke ugba iji nweta oge oru kachasi ngwa ngwa iji meputa ike ike. Ugbu a, anyị nwere oge agbanwe agbanwe iji dozie nke a n'ụzọ dị mfe. Nkà na ụzụ.
Teknụzụ na-agbanwe agbanwe oge valvụ bụ usoro dị mfe yana sistemụ arụmọrụ dị ọnụ ala na teknụzụ na - agbanwe agbanwe oge niile. Ọ na-eji usoro hydraulic na gear na-ebugharị iji gbanwee oge valvụ dịka mkpa nke injin ahụ. Oge mgbanwe valvụ enweghị ike ịgbanwe oge mmeghe valvụ, mana enwere ike ijikwa oge mmeghe ma ọ bụ mechie valvụ ahụ tupu oge eruo. N'otu oge ahụ, ọ nweghị ike ijikwa ọnya mmeghe valvụ dị ka camshaft na-agbanwe agbanwe, yabụ na-enwe mmetụta dị oke mma iji melite arụmọrụ nke injin ahụ.
N'ihe banyere oge mgbanwe valvụ, HONDA engine nwere otu ụzọ. Mgbe injin ahụ na-arụ ọrụ dị ala, obere pistin nọ n'ọnọdụ mbụ, a na-ekewapụkwa ogwe aka atọ. Igwe isi na kamera nke abụọ na-agbanye ogwe aka isi na ogwe aka nke abụọ. Jikwaa mmeghe na mmechi nke valvụ oriri abụọ, nkwalite valve dị obere, ọnọdụ ahụ dị ka igwe nkịtị. Ọ bụ ezie na etiti cam na-emekwa ka ogwe aka dị n'etiti, n'ihi na a na-ekewapụta ogwe aka, a na-achịkwa ogwe aka abụọ ndị ọzọ na ya, ya mere, ọnọdụ mmeghe na mmechi nke valvụ agaghị emetụta.
Mana mgbe injin ahụ ruru ọsọ ọsọ dị elu (dịka ọmụmaatụ, mgbe ụgbọ ala egwuregwu Honda S2000 ruru 5500 rpm na 3500 rpm), kọmpụta ahụ ga-akụzi valvụ solenoid iji rụọ ọrụ sistemụ hydraulic ma kpoo obere piston ahụ na ogwe aka. -eme ka atọ rocker ogwe aka na-ekpochi n'ime otu ahu na-chụpụrụ site n'etiti cam ọnụ. Ebe ọ bụ na etiti etiti dị elu karịa cam ndị ọzọ ma nwee nnukwu mbuli elu. Vehicle akụkụ engine valvụ na-agbatị oge ma na-ebuli elu. Mgbe ọsọ engine gbadara na otu obere ọsọ ọsọ, nrụgide hydraulic na ogwe aka na-ebelata, piston na-alaghachi n'ọnọdụ ya n'okpuru ọrụ nke oge opupu ihe ubi, na ogwe aka atọ dị iche.
N'ụzọ dị otú a, ị nwere ike ijikwa oriri mmanụ gị na obere ọsọ, ma n'otu oge ahụ gboo mkpa gị maka ịgbanye ike ọkụ mgbe injin dị na ọsọ ọsọ. A na-achịkwa sistemụ VTEC dum na kọmputa isi kọmputa (ECU). ECU na - anata ma na - edozi usoro nke ihe ntanetị (gụnyere ọsọ, nrụgide oriri, ọsọ ụgbọ, okpomọkụ mmiri, wdg), na - ewepụta akara njikwa kwekọrọ, ma dozie sistem hydraulic rocker site na solenoid valves Ya mere na injin ahụ na-achịkwa ya cam dị iche iche na ọsọ ọsọ dị iche iche, nke na-emetụta oghere na oge nke valvụ oriri. Ya mere iji mepụta ike ị na-atụ anya inweta.